I-Posky Boeing i-777-200 emhlophe, ayikho ama-liveries, akukho lutho
Umbuzo I-Posky Boeing i-777-200 emhlophe, ayikho ama-liveries, akukho lutho
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #884 by jangor
Sawubona, ngilande i-Posky B777-200 kusuka ku-Rikooo futhi ngiyilandile kanye nomphumela we-gauge wokutakula ithuluzi. Ngifake kokubili futhi nginezindiza ezine ezihlezi efonini yami. Kodwa-ke, uma ngiwavule, ahlanzekile, awekho ama-liveries, akekho obala, ayikho imininingwane, ayikho i-cockpit, ayikho. Igobolondo elimhlophe nje.
Ngilandile futhi ngifake ezinye ze-B777 eziningana kusuka ku-Rikooo nakwamanye amawebhusayithi e-freeware, kodwa ahlala efana njalo. Ngingasho ukuthi i-FSX yami ithambile nge-B777. Ngokufanayo, ngendlela, kwenzeka kuDe Haviland Dash 8-400. Ngiphinde ngithumele isithombe esiphezulu sezindiza ezimhlophe.
Ngiyilungiselela kanjani lokhu njengoba ithola izinzwa zami.
ngonyaka 1 3 amaviki adlule #910 by Parky-Joe
Ngena kuzilungiselelo bese wenza ngokwezifiso bese uvula ibhokisi le-'ExperX 10 'kuqala futhi ama-liveries akho kufanele abe khona. Ngabe ngiyinkinga efanayo mina futhi ngithole kuphela indlela yokuxazulula ngayo phakathi kwamasonto okulinga nephutha. Ithemba lisebenza kuwe.